Dreams Khabar ‘बहिनी जाने हो ? कति पैसा लिन्छौ ?’
‘बहिनी जाने हो ? कति पैसा लिन्छौ ?’
बुधबार, १९ मङि्सर
ललितपु । आफन्तलाई लिन बसपार्क पुग्नुभएकी शर्मिला कँडेललाई एक पुरुषले मोटसाइकलमा आएर सोधे ‘बहिनी जाने हो ? कति पैसा लिन्छौ ?’ उहाँलाई झनक्क रीस उठ्यो र ती पुरुषलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ‘‘बरु तपाईं चाहीँ भन्नुहोस् कति पैसा लिनुहुन्छ ?’’ ती पुरुष बोलेनन् र सरासर आफ्नो बाटो लागे । गाउँदेखि काठमाडौँसम्म अनि आफन्तदेखि नचिनेकासम्मको हिंसा उहाँले धेरै सहनुभयो । अहिले भने उहाँ हिंसाको प्रतिवाद गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसा गर्नेलाई चुप लाग्दा फेरि पनि आफैँलाई वा अरुलाई हिंसा गर्छ तर हामीले प्रतिवाद ग¥यौँ फेरि उसले हिम्मत गर्दैन ।”